Endritsoratra italiana: endritsoratra izay atolotray ho an'ny volavolanao | Famoronana an-tserasera
Rehefa manana asa hatao ianao, mamoaka boky, manolora tetikasa iray, ny fisafidianana ny endritsoratra mety dia mety ho zava-dehibe kokoa noho ny eritreretinao. Miankina amin'ny tanjona tianao hahatratrarana an'io asa io dia afaka misafidy litera hafa ianao, fomba iray hafa. Raha ny marina, ny safidy ratsy dia hanakana ny olona tsy hifandray amin'ilay hafatra ampitaina. Ary, imbetsaka isika dia tsy miraharaha ny fampiasana azon'ny litera samihafa, toy ny sora-mandry sy ny endriny.
Hanampy anao hahatakatra inona ny sora-mandry ary manome anao safidy ho an'ny endritsoratra amin'ity karazana ity, alohan'ny hahafantaranao azy bebe kokoa. Ary izany no hataontsika manaraka.
1 Inona no atao sora-mandry
1.1 Momba ny sora-mandry: endritsoratra sy toetra mampiavaka azy
2 Tokony hampiasaina ny sora-mandry?
3 Endritsoratra italiana: endritsoratra azonao ampiasaina
3.1 Script mandihiza
3.7 Kurrent tamin'ny taonjato faha-18
3.8 Kafe mahafinaritra
Inona no atao sora-mandry
Ny italiana dia fantatra amin'ny anarana hoe sora-tanana na taratasy. Izy io dia fomba fanoratana izay mitovy amin'ny tena fomba fanoratanao, miaraka amin'ny fironana litera, miaraka na tsy mifangaro litera ... Na izany aza, ny endritsoratra mirona miankavanana (litera italy na "italy").
Efa an-jatony taona maro no nanoratana ity typeface ity. Raha ny marina dia ny litera sora-tanana ilay nanomboka nampiasaina hanoratra tononkalo, boky sns. satria taloha ny olona dia "nanao kopia" lahatsoratra handrafetana boky amin'izy ireo, ary izy rehetra ireo dia nosoratana niaraka tamin'ity taratasy ity.
Na izany aza, ny iray izay tena itovizany ankehitriny ampiasaintsika ankehitriny dia avy tamin'ny taonjato faha-XNUMX, izay ahitantsika ohatra amin'izany amin'ny paosy, nosoratana tamin'ny penina sy ranomainty.
Fotoana fohy taorian'izay dia nanapa-kevitra ny aristokrasia britanika fa sokitra amin'ny takelaka varahina ity endriny ity mba hampiasaina hanaovana pirinty, ary ny firoboroboana dia nanomboka nandravaka boky sy gazety maro. Raha ny marina dia tany amin'ny taona 70 ny tampony, ary tsy lavina fa hiverina amin'ny lamaody afaka fotoana fohy.
Momba ny sora-mandry: endritsoratra sy toetra mampiavaka azy
Androany, ny sora-mandry sy ny endriny dia miavaka amin'ny manana tsy fahalavorariana, izay mampiavaka azy ireo manokana, fomba iray toa manoratra amin'ny penina na borosy, ary ampidirina amin'ny ambaratonga lehibe kokoa na kely kokoa, miaraka amin'ny firoboroboana.
Betsaka amin'izy ireo no mora vakiana, na dia misy aza ny hafa izay, noho ny fironana sy ny fomba fanoratana, dia tsy azo vonoina, indrindra raha tsy ampiasaina ny haben'ny endri-tsoratra lehibe.
Tokony hampiasaina ny sora-mandry?
Na inona na inona azonao atao mampiasa sora-mandry amin'ny endrits samy hafa, na maimaim-poana na karama, ny marina dia io karazana fanoratana io dia ampiasaina amin'ny tanjona voafaritra tsara. Ohatra:
Raha hametraka teny vahiny: mazàna dia, rehefa manoratra fehezan-teny manana teny voasoratra amin'ny fiteny hafa (frantsay, anglisy, italianina ...) amin'ny lahatsoratra espaniola ianao, dia apetraka amina sora-mandry izany teny izany.
Mametraka anaram-bosotra, na teny solon'anarana fa tsy tena anarana.
Raha ny lohateny, na sarimihetsika, boky, sns.
Ho an'ny anaran'ny karazana, izany hoe ny anarana ara-tsiansa biby na zavamaniry.
Ho an'ny anarana mety amin'ny fomba fitaterana (Orient Express, Renfe, Alsa ...).
Raha ny anaran'ireo trangan-javatra meteorolojika (Filomena, Katrina ...) no tianao holazaina.
Na dia izany aza ny mahazatra amin'ny sora-mandry sy ny fampiasana ny endritsoratra, ny marina dia misy ny toe-javatra "miavaka" ahafahanao mampiasa azy koa. Ohatra, mety ho an'ny toe-javatra ara-dalàna, toy ny fanoratana fanasana fampakaram-bady, taratasy tantaram-pitiavana, na fanaovana lohateny sy lohateny mahasarika ny saina, na amin'ny magazine, na asa, na boky ...
Amin'ny pejin-tranonkala, na zavatra mifandraika amin'ny famolavolana, azo atao koa ny mandinika ny sora-mandry. Ny olana dia izay ity typeface ity dia tsy mora takarina raha vao jerena Ary, na dia tsara tarehy aza izy io, dia mety hanasarotra ny fandehanan'ny hafatra, noho izany antony maro no maniry ny hamela ireo karazana fonosana ireo ho an'ny "haingon-trano".
Endritsoratra italiana: endritsoratra azonao ampiasaina
Ireto ambany ireto dia nanao a fanangonana endritsoratra italiana izay azonao ampiasaina raha ilainao izany. Mazava ho azy, tsarovy fa tsy tokony hanararaotra azy ireo ianao satria, raha be loatra ny endriny hapetrakao dia mety be loatra amin'ny endriny farany ny endritsoratra mihitsy.
Ireto no tolo-kevitray:
Natao sora-mandry, izy io dia iray amin'ireo endri-tsoratra tsara indrindra azonao ampiasaina. Manana tombony izany, na dia miraikitra aza ireo litera, ary miroborobo izy io, mora vakina sy takatra tsara, mba hahafahanao mametraka azy ao anaty bilaogy, publication, sns.
Mazava ho azy fa tsy dia ara-dalàna loatra hoy isika, fa ao anatin'ny endritsoratra italika tsy ara-potoana. Na izany aza, mety ho tsara amin'ny tetikasanao io, indrindra raha tianao hiavaka izy noho ny fahasahiany mivoaka.
Allura dia iray amin'ireo endritsoratra amin'ny sora-mandry izay azonao ampiasaina. Mazava kokoa izy io, toy ny hoe manoratra amin'ny tanana ianao, miampy azy dia miroborobo kokoa. Mbola azo vakiana ihany io. Ny zavatra tokana izay, indraindray, tsy maintsy omenao a habe lehibe kokoa noho ny mahazatra ka takatra tsara.
Ho an'ny logo, fanasana sns. mety ho lavorary.
Manomboka amina endritsoratra ozona izay nanjary somary sarotra kokoa ny namaky azy, voalohany satria ny litera rehetra dia mifanakaiky akaiky, ary ny faharoa satria mampiala azy ireo miankavanana. Miaraka amin'ny famolavolana ny taratasy dia toa izany toy ny hoe ny teny tsirairay dia ampahany amin'ny ensemble kanto.
Mahafinaritra ho an'ny fehezanteny fohy satria raha mametraka lahatsoratra lehibe loatra ianao dia mety ho sarotra ny hahatratra azy hatramin'ny farany.
Raha mitady karazana font italic ianao dia manana sora-baventy feno curl sy endrika sarotra, ity dia mety ho iray amin'ireo tsara indrindra. Ary ilay izy, na dia kanto sy mora vakiana aza ny faritra ambany, ny tranga ambony no hahasarika ireo mpampiasa rehefa mahita azy ireo.
Amporisihinay manokana izany ho an'ny lohateny (ohatra amin'ny boky, toko ...).
Tadidinao ve fa misy olona izay rehefa manoratra dia tsy azony tsara izay napetrany? Eny amin'ny Popsies azonao atao ny maka tahaka an'io vokatra io, ny fisintomana ny saina satria tsy fantatrao na mametraka zavatra na zavatra iray io.
Es mety raha hiala amin'ny lahatsoratra mahazatra, hisarika ny saina amin'ny fahalianana hahafantatra izay nitafiany.
Amin'ireo litera ozona dia iray amin'ireo endri-tsoratra izay hanolotra anao ireo taratasy miroborobo sy calligraphic indrindra. Ary io no ao amin'ny litera sasany dia hameno anao amin'ny tadivavarana, curl ary antsipiriany hafa izay manao azy, ho azy manokana, ny haingon-trano feno misy sonia na lohateny (nefa tsy mila manampy zavatra hafa).
Kurrent tamin'ny taonjato faha-18
Izahay dia tsy mamporisika an'ity endritsoratra ity hampiasaina be loatra, satria sarotra be ny mamaky azy, fa raha mametraka habe mety sy mampiasa azy amin'ny teny tokana ianao (tsy mihoatra ny 3) dia mety hahasarika.
Mazava ho azy, tadidio izany ny fomba tokony hataonao dia ny mametraka lahatsoratra fa aza miraharaha izay tsy vakiana, satria ny endriny mihitsy no tsy maintsy misambotra ny mpamaky.
Ity endri-tsoratra ity dia iray amin'ireo madio indrindra sy be fika indrindra. Ary izany dia, na dia italiana aza, avelany fotsiny ny felany eo amin'ny faran'ny, manao azy ho toy ny mandrafitra ny tenany amin'ny onja sy ny fiolahana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » loharanom-baovao » Sora italiana: endri-tsoratra izay atolotray